Excedrin (အတ်စ်စီဒရင်) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Excedrin (အတ်စ်စီဒရင်)
Excedrin (အတ်စ်စီဒရင်) ကဘာလဲ။
Generic Name: Excedrin (အတ်စ်စီဒရင်) Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Excedrin (အတ်စ်စီဒရင်) ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
Excedrin မှာ acetaminophen, aspirin နဲ့ ကဖင်းဓါတ်တို့ ပေါင်းစပ်ပါဝင်ပါတယ်။ Acetaminophen က အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးနဲ့ အဖျားကျဆေးဖြစ်ပြီး salicylate အုပ်စုဝင်ဖြစ်တဲ့ aspirin က ခန္ဓါကိုယ်ကနာကျင်မှု၊ ဖျားနာမှုနဲ့ ရောင်ရမ်းမှုတို့ကို ဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ အရာဝတ္ထုများထွက်ရှိမှုကိုလျော့ကျစေပါတယ်။ ကဖင်းဓါတ်ကတော့ ဗဟိုအာရုံကြောအဖွဲ့အစည်းကိုလှုံ့ဆော်ပေးပြီးသွေးကြောနံရံက ကြွက်သားတွေကျုံ့ဝင်မှုကို ပြေလျော့စေခြင်းအားဖြင့် သွေးလှည့်ပတ်မှုကိုကောင်းမွန်စေပါတယ်။
Exacedrinကိုစိတ်ဖိစီးမှုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ ခေါင်းကိုက်ဝေဒနာ၊ ခေါင်းတစ်ခြမ်းကိုက်ဝေဒနာ၊ ကြွက်သားကိုက်ခဲမှုများ၊ ဓမ္မတာလာစဉ် နာကျင်ကိုက်ခဲမှုများ၊ အဆစ်ရောင်ရမ်းခြင်း၊ သွားကိုက်ခြင်း၊ သာမန်အအေးမိဝေဒနာနဲ့ နှာပိတ်ခြင်းတို့ သက်သာအောင် ကုသရာမှာအဓိကအသုံးအပြုပါတယ်။
Excedrin (အတ်စ်စီဒရင်) ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်သလဲ
Exacedrinကိုဆေးညွန်းတွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းသို့မဟုတ် သင့်ဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားသည့်အတိုင်းတိတိကျကျ လိုက်နာသောက်သုံးပါ။ ဒီဆေးမှာပါဝင်တဲ့ acetaminophen ကိုလိုအပ်တာထက်လွန်ကဲစွာသောက်သုံးမိမယ်ဆိုရင် အသည်းပျက်စီးနိုင်ပြီးအသက်ဆုံးရှုံးနိုင်တဲ့အတွက် ကိုယ့်သဘောနဲ့ကိုယ် ဆေးပမာဏတိုးမသောက်ပါနှင့်
Exacedrinကြောင့် အစာအိမ်ထိခိုက်မှု ရှိလာပါက ၎င်းကို အစာသို့မဟုတ် နို့နှင့်တွဲသောက်ပါ။
ဆေးသောက်သုံးပြီး ၇ရက်ကြာတဲ့အထိကိုယ်ခံစားနေရတဲ့ ရောဂါဝေဒနာများ မသက်သာခဲ့ရင်၊ ၃ရက်ထက်ပိုပြီး ဖျားနေခဲ့ရင် ဒါမှမဟုတ် ၁၀ရက်ထက်ပိုပြီး နာကျင်မှု၊ ရောင်ရမ်းမှု တစ်ခုခုခံစားနေရရင် သင့်ဆရာဝန်ကို အသိပေးပါ။
ဒီဆေးဝါးဟာ ဆီးတွင်းသကြားဓါတ်ပမာဏဓါတ်ခွဲစစ်ဆေးမှုအဖြေတွေကိုအပြောင်းအလဲဖြစ်စေနိုင်တဲ့အတွက် သင့်ကိုကုသပေးတဲ့ ဘယ်ဆရာဝန်ကိုမဆို သင်ဒီဆေးသောက်သုံးနေကြောင်းပြောပြထားပါ။
အကယ်၍ ခွဲစိတ်ကုသမှုခံယူဖို့ လိုအပ်လာမယ်ဆိုရင် သင် ဒီဆေးသောက်သုံးနေကြောင်း ခွဲစိတ်ဆရာဝန်ကို ကြိုတင်အသိပေးထားပါ။ သင့်အနေနဲ့ ဆေးသောက်သုံးမှုကိုခေတ္တခဏရပ်တန့်ထားဖို့ လိုအပ်နိုင်ပါတယ်။
Excedrin (အတ်စ်စီဒရင်) ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းရမလဲ
Exacedrinကိုအခန်းအပူချိန်တွင် တိုက်ရိုက်နေရောင်ခြည်မထိုးအောင်နဲ့ စိုစွတ်မှုမရှိအောင်ထားတာကအကောင်းဆုံးသိုလှောင်သိမ်းဆည်းတဲ့နည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်တာနဲ့ ဆေးအနေအထားပျက်ယွင်းမှုတွေမဖြစ်အောင်လို့ Exacedrinကိုရေချိုးခန်းထဲမှာသိမ်းဆည်းတာနဲ့ ရေခဲအောင် သိမ်းဆည်းတာတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။Exacedrinဆေးအမျိုးအစားနဲ့၊ ဆေးထုတ်လုပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီကွဲပြားမှုပေါ်မူတည်ပြီးသိမ်းဆည်းတဲ့ပုံစံကွဲပြားခြားနားမှုရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒီအတွက် ဆေးဘူးအခွံမှာပါတဲ့ သိုလှောင်သိမ်းဆည်းမှုညွှန်ကြားချက်ကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးတာမျိုးဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကိုမေးမြန်းတာမျိုးကိုအမြဲလုပ်ပါ။ လုံခြုံစိတ်ချရဖို့အတွက် ဆေးဝါးတွေအကုန်လုံးကို ကလေးတွေ၊ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်တွေနဲ့ ဝေးရာမှာထားပါ။
Exacedrinကိုအိမ်သာထဲကိုပစ်ချတာနဲ့ ရေထွက်ပေါက်တွေထဲကနေဆေးချတာမျိုးကိုမလုပ်သင့်ပါဘူး။ ဆေးဝါးတွေကိုမလိုအပ်တော့တဲ့အခါ ဒါမှမဟုတ် သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားတဲ့အခါတွေမှာစနစ်တကျစွန့်ပစ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဆေးဝါးများကို စနစ်တကျဘယ်လိုစွန့်ပစ်ရမယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ သင့်ရဲ့ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နဲ့တိုင်ပင်ပါ။
Excedrin (အတ်စ်စီဒရင်) အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် သို့မဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန် – အကယ်၍သင်ဟာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင် သို့မဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေတဲ့ မိခင်တစ်ဦး ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင် ဘယ်ဆေးကိုမဆို ဆရာဝန်မညွှန်ကြားဘဲမသောက်သုံးသင့်ပါဘူး။
Exacedrinသို့မဟုတ် အခြားဆေးဝါးများတွင်ပါဝင်သည့် ပစ္စည်းတစ်မျိုးမျိုးနှင့် ဓါတ်မတည့်ခြင်း
Exacedrinကိုအဖျားရှိနေတဲ့ ဒါမှမဟုတ် တုပ်ကွေးရောဂါ၊ ရေကျောက်ရောဂါ လက္ခဏာရှိနေတဲ့ ကလေးနဲ့ ဆယ်ကျော်သက်တွေအတွက် အသုံးမပြုသင့်ပါဘူး။ ဒီဆေးမှာပါဝင်တဲ့ aspirin ကြောင့် Reye’s syndrome လို့ခေါ်တဲ့ ပြင်းထန်ပြီးအသက်ကိုထိခိုက်နိုင်တဲ့ ရောဂါတစ်မျိုး ဖြစ်လာနိုင်တာကြောင့်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Acetaminophen (Tylenol), aspirin, caffeine သို့မဟုတ် စတီးရွိုက်မပါဝင်တဲ့ အရောင်ကျဆေးတစ်မျိုးမျိုး (Advil, Motrin, Aleve, Orudis, Indocin, Lodine, Voltaren, Toradol, Mobic, Relafen, Feldene) နဲ့ ဓါတ်မတည့်သူတွေဟာလည်းExacedrinမသောက်သုံးသင့်ပါဘူး။
Exacedrinရဲ့ အဓိကပါဝင်ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ aspirin က အစာအိမ်နဲ့အူလမ်းကြောင်းသွေးယိုခြင်းကို ဖြစ်ပေါ်စေပြီးအခန့်မသင့်ရင် အသက်သေဆုံးစေနိုင်တဲ့အထိ အန္တရာယ်ကြီးပါတယ်။ ဆေးသောက်နေစဉ်အတောအတွင်း ကြိုတင်လက္ခဏာတစ်ခုမှမပြဘဲရုတ်တရက် သွေးယိုနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သင့်မှာအောက်ဖော်ပြပါ ကျန်းမာရေးပြဿနာတစ်ခုခုရှိခဲ့မယ်ဆိုရင် Exacedrinသောက်သုံးဖို့ စိတ်ချရခြင်းရှိမရှိသင့်ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကိုမေးမြန်းသင့်ပါတယ်။
အသည်းရောဂါ၊ အသည်းခြောက်ရောဂါ၊ အရက်စွဲရောဂါရဖူးခြင်း၊ တစ်နေ့လျှင် အယ်လ်ကိုဟောပါဝင်သည့် အဖျော်ယမကာ၃ယူနစ်ထက်မနည်း သောက်သုံးခြင်း
အစာအိမ်နာ၊ အစာအိမ်နှင့်အူလမ်းကြောင်းသွေးယိုခြင်း၊ အူမကြီးအနာဖြစ်ပြီးရောင်ရမ်းခြင်း
Hemophilia ကဲ့သို့ သွေးရောဂါအမျိုးမျိုး
ခေါင်းကိုက်ဝေဒနာအတွက် Exacedrinသောက်သုံးနေစဉ်အတောအတွင်းအောက်ပါလက္ခဏာတစ်ခုခု ဖြစ်လာခဲ့လျှင် ဆေးကုသမှု အမြန်ဆုံးခံယူပါ။
အိပ်ရာထဲလဲနေရလောက်အောင် ပြင်းထန်သည့် ခေါင်းကိုက်ဝေဒနာခံစားရခြင်း
ဖြစ်နေကျပုံစံနှင့်မတူသည့် ခေါင်းကိုက်ဝေဒနာ ခံစားရခြင်း
ချောင်းဆိုးပြီးချိန်၊ ကိုယ်ကိုရှေ့သို့ကိုင်းညွှတ်ပြီးချိန်၊ ကိုယ်လေ့ကျင့်ခန်းပြုလုပ်ပြီးချိန်များတွင် ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ ဦးခေါင်းပိုင်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရပြီးခေါင်းကိုက်ခြင်း
အသက် ၅၀ကျော်ပြီးမှ ပထမဦးဆုံးခေါင်းကိုက်ခြင်း
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Excedrin (အတ်စ်စီဒရင်) ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
Excedrin (အတ်စ်စီဒရင်) ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
Exacedrinသောက်သုံးပြီး ခန္ဓါကိုယ်မှာအင်ပြင်ထခြင်း၊ အသက်ရှူရခက်ခြင်း၊ မျက်နှာ၊ နှုတ်ခမ်း၊ လျှာ၊ လည်ချောင်းတို့ ရောင်ရမ်းခြင်းစတဲ့ ပြင်းထန်တဲ့ ဓါတ်မတည့်တုန့်ပြန်မှုလက္ခဏာတွေ ဖြစ်လာခဲ့ရင်အရေးပေါ်ဆေးကုသမှု အမြန်ဆုံးခံယူပါ။
ရှားရှားပါးပါးဆိုသလို ဒီဆေးမှာပါဝင်တဲ့ acetaminophen ကြောင့် အသက်ဆုံးရှုံးစေနိုင်လောက်တဲ့အထိ ပြင်းထန်တဲ့ အရေပြားတုန့်ပြန်မှုတစ်မျိုး ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ ယခင်က acetaminophen သောက်သုံးပြီးဘာမှမဖြစ်ခဲ့ဖူးသူတွေမှာတောင် ဒီပြဿနာရုတ်တရက် ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ ဒီဆေးသောက်သုံးပြီးအရေပြားနီမြန်ခြင်း၊ အဖုအပိမ့်အနီကွက်များထွက်ပြီးအရည်ကြည်ဖုထခြင်း၊ အရေခွံကွာခြင်းစတဲ့လက္ခဏာတွေ ပေါ်လာခဲ့ရင် သင့်ဆရာဝန်ကို ချက်ချင်းအကြောင်းကြားသင့်တဲ့အပြင် acetaminophen ပါဝင်တဲ့ ဘယ်ဆေးဝါးကိုမဆို လုံးဝထပ်မံမသောက်သုံးသင့်ပါဘူး။
အောက်ပါလက္ခဏာတစ်ခုခု ဖြစ်လာခဲ့ရင်လည်းExacedrinသောက်သုံးမှုကိုချက်ချင်းရပ်ပြီးသင့်ဆရာဝန်ကို ချက်ချင်းအကြောင်းကြားပါ။
ပြင်းပြင်းထန်ထန် စိတ်လှုပ်ရှားခြင်း၊ စိုးရိမ်ထိတ်လန့်ခြင်း၊ စိတ်ရှုပ်ထွေးခြင်း၊ စိတ်တုန်လှုပ်ခြင်း
အလွန်ရေငတ်ခြင်း၊ ပူအိုက်ခြင်း၊ ဆီးမသွားနိုင်ခြင်း၊ ချွေးဒီးဒီးကျခြင်း၊ အရေပြားပူလောင်ခြောက်သွေ့ခြင်း
အစာအိမ်သွေးယိုသည့်လက္ခဏာများ – သွေးဝမ်းသွားခြင်း၊ ကတ္တရာစေးကဲ့သို့ ဝမ်းမဲမဲသွားခြင်း၊ သွေးအန်ခြင်း၊ ကော်ဖီနှစ်ရောင်များအန်ခြင်း
သွေးတွင်းပိုတက်ဆီယမ်ပမာဏ မြင့်တက်သည့်လက္ခဏာများ – နှလုံးခုန်နှေးခြင်း၊ သွေးခုန်အားနည်းခြင်း၊ ကြွက်သားအားနည်းခြင်း၊ တစ်ကိုယ်လုံးကျင်နေသလိုခံစားရခြင်း
အသည်းထိခိုက်သည့်လက္ခဏာများ – ပျို့ချင်အန်ချင်ဖြစ်ခြင်း၊ အစာအိမ်အောင့်ခြင်း၊ ယားယံခြင်း၊ အစာစားချင်စိတ်မရှိခြင်း၊ ဆီးအရောင်ရင့်ခြင်း၊ ရွှံ့စေးရောင်ဝမ်းသွားခြင်း၊ မျက်စိဝါခြင်း၊ အသားဝါခြင်း
Exacedrinကြောင့် ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိတဲ့ လက္ခဏာတွေကတော့
စိတ်ဓါတ်ကျခြင်း၊ စိတ်လှုပ်ရှားပူပင်ခြင်း၊ ဂနာမငြိမ်ခြင်း
ဘယ်ဆေးတွေက Excedrin (အတ်စ်စီဒရင်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Exacedrineဟာသင်အခုလောလောဆယ်သောက်သုံးနေတဲ့တခြားသော ဆေးဝါးတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဆေးဝါးဓါတ်ပြုမှုတွေ မဖြစ်လာအောင်လို့ သင်လက်ရှိသောက်သုံးနေတဲ့ ဆေးဝါးတွေအားလုံးရဲ့စာရင်းကို လုပ်ထားပြီး (စာရင်းလုပ်တဲ့အခါမှာ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားတာတွေ၊ မညွှန်ကြားဘဲသောက်သုံးနေတာတွေ၊ သဘာဝဆေးဘက်ဝင်ပစ္စည်းတွေအားလုံးပါဝင်ပါတယ်) ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကိုအမြဲပြောပြပါ။ ဆေးဝါးတွေကို ဆရာဝန်ခွင့်ပြုချက်မပါဘဲသောက်သုံးခြင်း၊ ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ ပမာဏကိုပြောင်းလဲခြင်းတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Excedrin (အတ်စ်စီဒရင်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
Exacedrinက အစားအသောက် ဒါမှမဟုတ် အရက်သေစာနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေမဖြစ်လာအောင်လို့ အစားအသောက်၊ အရက်သေစာတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်ချေရှိမရှိကိုမေးမြန်းတိုင်ပင်ပါ။
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Excedrin (အတ်စ်စီဒရင်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Exacedrinဟာသင့်ရဲ့ နဂိုကျန်းမာရေးအခြေအနေများနဲ့ သက်ရောက်ဓါတ်ပြုမှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေကိုပိုဆိုးသွားစေတာဒါမှမဟုတ် ဆေးသက်ရောက်မှုပုံစံပြောင်းလဲသွားတာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေအကုန်လုံးကိုသင့်ရဲ့ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကိုအသိပေးဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Excedrin (အတ်စ်စီဒရင်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
တစ်ကြိမ်သောက်လျှင် Acetaminophen နဲ့ aspirin စုစုပေါင်း ၆၅၀ မီလီဂရမ်အထိ၊ ၄နာရီမှ ၆နာရီခြားတစ်ကြိမ်၊ လိုအပ်သလိုသောက်သုံးရန်
တစ်နေ့လျှင် Acetaminophen ၅၀၀ မီလီဂရမ်၊ aspirin ၅၀၀ မီလီဂရမ်၊ ကဖင်း ၁၃၀ မီလီဂရမ်၊ လိုအပ်သလိုသောက်သုံးရန်
အကြာဆုံးအသုံးပြုနိုင်သည့် အချိန်အတိုင်းအတာ – ၄၈ နာရီ
ကလေးတွေအတွက် Excedrin (အတ်စ်စီဒရင်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
လေးလူနာများမှာဘယ်လောက်အချိုးအစားပေးရမလဲဆိုတာအတည်မပြုရသေးပါ။ သင့်ကလေးငယ်အတွက် သောက်သုံးရန် စိတ်ချရမှုရှိချင်မှရှိနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ဘယ်ဆေးဝါးမဆို အသုံးမပြုရသေးခင်မှာစိတ်ချရမှုအနေအထားကိုအပြည့်အဝနားလည်ဖို့ လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ အချက်အလက်များထပ်မံရရှိရန်အတွက် သင့်ရဲ့ ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူနဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ/
Excedrin (အတ်စ်စီဒရင်) ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ
Exacedrinကိုဆေးပြား၊ ဆေးမှုန့် ပုံစံများဖြင့် ရရှိနိုင်ပါတယ်။
Exacedrinကိုသောက်ဖို့လွတ်သွားခဲ့ပါက (မေ့ခဲ့ပါက) သတိရတဲ့အချိန်မှာအမြန်ဆုံးသောက်သုံးပါ။ သို့သော်လည်းနောက်တစ်ကြိမ်ဆေးသောက်ရမယ့်အချိန်နဲ့ နီးကပ်နေပြီဆိုရင်တော့ လွတ်သွားတဲ့အကြိမ်ကိုကျော်ပြီးပုံမှန်အချိန်မှာပဲသောက်လိုက်ပါ။ ဆေးပမာဏကို နှစ်ဆတိုးသောက်တာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့။
တည်းဖြတ်သည့်နေ့ နိုဝင်ဘာ 26, 2018 | နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်ခြင်း ဇူလိုင် 29, 2019
Excedrin®. https://www.drugs.com/excedrin.html. Accessed September 8, 2017
Excedrin®. https://www.excedrin.com/migraines/. Accessed September 8, 2017
နောက်ဆို လစဉ်အမြဲကြုံရမယ့် ရာသီပန်းကိစ္စအတွက် ညီမလေးတို့ ကြိုသိထားဖို့
သိကိုသိထားသင့်တဲ့ နှလုံးတုန်ခြင်းကိုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းအရင်း ၁၀ ချက် ။ ။
ကျန်းမာခြင်းနည်းလမ်းများ, ခွဲစိတ်ကုသမှုများ, အလှအပ
ကိုယ့်မှာရှိနေတဲ့အဆီတွေကို စုပ်ထုတ်ပစ်ချင်ပြီလား ။ ။